Marko 13 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Kwakubon ukuba uyaphuma etempileni, uthi omnye umfundi wakhe kuye, Mfundisi, uyawabona na la matye angaka, nezi zakhiwo zingaka?
Baye, akubon ukuba uhleli eNtabeni yemiNquma malungana netempile, bembuza ngasese ooPetros noYakobi noYohane noAndreya, besithi,
Sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto, nokuba uya kuba yini na umqondiso, xa zonke ezo zinto ziza kupheliswa.
Wabaphendula ke uYesu waqala ukuthi, Lumkani ningalahlekiswa bani;
kuba baninzi abaya kuza egameni lam, besithi banguye uKristu, balahlekise into eninzi.
Xa nithe neva iimfazwe namarhe eemfazwe, musani kuba navuso; kuba ezo zinto zimelwe kukuhla, ukanti kona ukuphela akukabikho;
kuba uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani; kuya kubakho iinyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo; kuya kubakho neendlala neenkathazeko;ziingqaleko ke zenimba ezo.
Zilumkeleni ke okwenu; kuba baya kuninikela ezintlanganisweni zamatyala, nityatyulwe ezindlwini zesikhungu,nimiswe phambi kwabalawuli nookumkani ngenxa yam, kube bubungqina kubo.
Xa sukuba ke benirhola beya kuninikela, musani ukuyixhalela kwangaphambili into eniya kuyithetha, ningacamangi nokucamanga nto. Into enithe nayinikwa ngelo xa, thethani yona;kuba asinini enithethayo, nguMoya oyiNgcwele.
Ke kaloku, umzalwana uya kunikela umzalwana ekufeni, aze uyise anikele umntwana, bathi nabantwana bavukelane nabazali,bababulalise;
nithiywe ngabantu bonke, ngenxa yegama lam. Ke onyamezelayo kude kube sekupheleni, lowo wosindiswa.
Ke kaloku, xa nithe nalibona isikizi lesiphanziso,ekwakuthethwa lona ngoDaniyeli umprofeti, limi apho lingamele kuba khona (olesayo makaqiqe), mabathi ngelo xa abo bakwaYuda basabele ezintabeni.
Ophezu kwendlu ke makangehli aye endlwini, angangeni aye kuthabatha into endlwini yakhe.
Nalowo usentsimini makangabuyeli emva, aye kuthabatha ingubo yakhe.
Thandazani ke, ukuze intsabo yenu ingabi khona ebusika.
Kuba yona loo mihla iya kuba yimbandezelo, engazanga ibekho enjalo kwasekuqalekeni kwendalo awayidalayo uThixo,kwada kwakalokunje; engasayi kubuya ibekho.
Kanjalo ukuba iNkosi ibingayinqamlelanga loo mihla,bekungayi kubakho mntu usindayo; koko ithe ngenxa yabanyulwa ebanyulileyo, yayinqamlela imihla leyo.
Ngelo xa ke, ukuba ubani uthe kuni, Nanku apha uKristu,nokuba uthe, Nankuya phaya, musani ukukholwa nguye;
kuba kuya kuvela ooKristu ababuxoki, nabaprofeti ababuxoki, benze imiqondiso nemimangaliso yokulahlekisa nabanyuliweyo, ukuba bekunokwenzeka.
Ngaloo mihla, emveni kwayo loo mbandezelo, liya kusuka ilanga lenziwe mnyama, ithi nenyanga ingabukhuphi ubumhlophe bayo;
Baya kumbona ke ngelo xesha uNyana woMntu esiza esemafini,enamandla amakhulu nobuqaqawuli.
Uya kuzithuma ngelo xesha izithunywa zakhe,abahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe, baphume kumacala omane omoya, kuthabathela esiphelweni sehlabathi kuse esiphelweni sezulu.
Wufundeni ke kuwo umkhiwane umzekeliso; xa selithe lathamba isebe lawo, lahluma amagqabi, niyazi ukuba likufuphi ihlobo.
Ngokukwanjalo nani, xa nithe nazibona ezo zinto zisihla,yazini ukuba kukufuphi, sekusemnyango.
Inene ndithi kuni, Asisayi kudlula esi sizukulwana,zingadanga zonke ezo zinto zibekho.
Kodwa akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa, azazi nezithunywa ezisemazulwini, akazi noNyana lo, kuphela nguYise.
njengokuba wathi umntu ehambela kwelinye, eshiya indlu yakhe, wabanika igunya abakhonzi bakhe, elowo wamnika umsebenzi wakhe, waza umgcini-mnyango wamwisela umthetho ukuba alinde.
Lindani ngoko, ngokuba ningakwazi ukuba kunini na ukuza komninindlu: kuko ngokuhlwa, kuko phakathi kobusuku, kuko ekulileni kweenkuku, kuko kusasa;
Oko ndikutsho kuni, ndikutsho kubo bonke, Lindani.